Asusu Igbo EFCC: Ụmụ T.A. Orji ka anyị na-enyocha - ENTER NIGERIA
Ọnụ na-ekwuru EFCC bụ Tony Orilade ewepụtala akwụkwọ ozi na-ekwu na ọbụghị na-ezie na ha na-achọ ụmụ Atiku Abubakar bụ onye ji aha PDP azọ ọkwa onyeisiala.
EFCC sị na ọtụtụ mmadụ na-ajụ ha ajụjụ ịmata ma onwere ka ha sị jide ụmụ Atiku Abubakar ịchọ ma o nwere ego mba ofesi ha ji ike dị.
N’okwu a, “nke bụ akụkọ na egwu. Onweghi eziokwu tọgbọ n’ime ya”.
Ha kwukwara na-ọtụtụ mmadụ amarala n’ụlọọrụ EFCC na-enyocha aka chiburu Abia Steeti bụ Theodore Orji bụ nke a na-ebo ebubo buuru ọkpụrụkpụ ego dị ijeri naịra iri abụọ na asaa (N27b).
Okwuru na, “Ka anyị na-eme nnyocha a, anyị chọpụtara na ụfọdụ ego ndị ahụ sị ụmụ ya n’aka gafee”.
EFCC na-enyocha ọtụtụ ihe ọdị ha ka ha eji ego ndị a zụta nke gụnyere ụgbọala.
“Fraịde gara aga anyị chụrụ otu n’ime ugboala ruo n’ụlọ oriri na nkwari dị n’Abuja”, dịka ha dere na-akwụkwọ a.
Ha sị na ha mechere kpụrụ Ogbonna Orji gbara afọ 32 bụ onye bu ụgbọla Range Rover a na-ere otu nde narị naịra (N100 m) na ogbo ya bụ Kelvin Ilonah bụ onye bukwa ụgbọla Range Rover a na-ere nde iri atọ na ise (N35 m).
Ka ha na-agba mmadụ abụọ a ajụjụ ọnụ ka ha kpọgara ha ebe ha bi bụ ebe ha na-akwụ ego dị nde naịra iri na atọ (N13 m) kwa afọ.
Ha chọpụtakwara ụgbọla ọzọ bụ Prado Jeep 2017 bụ nke dị n’ebe ha.
EFCC sị na mmadụ abụọ gbakwara ama nke na-enyere ha aka na nchọpụta ndị ọzọ.
Akwụkwọ ahụ dere na, “Ụmụ Atiku esoghị ndị ejidere”.
Ndị ụlọọrụ ahụ jikwa ohere ahụ gọrọ aka ha n’ebubo eboro ha izu gara aga maka ịkpọchị ọbaego Peter Obi.
Ha sịkwa na-eziokwu atọgbọghị na nka ma ọlị.
Jubril: Anwụghị m anwụ, a ka kwụm chịm – Buhari
Iji aghụghọ lee Jamb?
Obi mapụwakwa gị makana ngalaba ahụ na-ahụ maka ụle eji abanye mahadum sị na ha ga-amalite nyocha ga-esi 2009 ruo 2019.
Onye is mgbasa ozi Jamb bụ Fabian Benjamin sị Onye asambodo Jamb ya bụ adịbogorja ga-agbara aka.
Rochas Okorocha ekwuola na ọ naghị aga ụlọomeiwu maka ezumike nka.
Ọ sị na-agbanyeghị na-onwere etu obi na-eme ya makana onwere etu ọ dị na mmadụ ga-achịcha steeti gawa ịchị mpaghara steeti ahụ, o chọro ịga nọchịte anya Imo steeti n’ala Igbo etu pụrụiche makana “Imo enwebeghị onye nnọchịte anya kpọrọ akpọ.”
Ikeji bụ emume e ji mara ndị Arọ niile nke gunyere Arọchukwu na Arọndịzuọgụ.
Mmọnwụ dị icheiche pụtara ebe ahụ
Akpatị ọgwụ e ji eme emume.
Onye ntoroọbịa na-enweta onwe ya.
Ndị Arọchukwu na-eme nke ha na ngwụcha oge ọrụ ubi ebe Arọndịzuọgụ na-eme Ikeji tupu ha amalite ọrụ ubi nke afọ ahụrụ
Ọ bụ emume a ka e ji ekele Chineke maka ọkụkụ na owuwe ihe ubi kwa afọ ọbụla ma rịọkwa ya ogologo ndụ iji hụ afọ na-abia.
Emume a malitere mgbe gboo n’Arọndịzuọgụ mgbe Nnanna hiwere Ịzuọgụ si Arọchukwu bịa Arọndịzuọgụ.
A na-eme emume a n’abalị asaa nke gụnyere ịtụ aja dị icheiche, ebe ezinaụlọ ọbụla ga-egbu ewu na ọkụkọ were tụọrọ ndị nnanna ha aja
Ọzọ bụ ịpụ n’ama ebe ndị Ịzụọgụ niile ga-aga tie mmọnwụ dị icheiche.
Ndị mmadụ na-ete onwe ha agwa dị icheiche n’ụzọ ama.
Oriri na nkwari dị ya n’uju.
N’oge Ikeji Arọndịzuọgụ, ọtụtụ ụmụafọ ha ndị bi na Naịjirịa nakwa mba ofesi na-alọta iji kwanyere ndị nnanna ha ochie ugwu ruru ha.
Anyị hụrụ mmọnwụ karịrị asatọ ebe ahụ
Onye a na-ese, ọ na-ese onye ọzọ
Ndị ntoroọbịa ebe ha na-egosi ihe nkarị dị icheiche iji nweta onwe ha n’oge mmemme a.
A na-eme nkwado abụọ tupu ebido mmemme Ikeji, nke ndị ụka na nke ndị omenala.
Priscilla Ekwere Eleje bụ nwaanyị mbụ mbinyeaka ya na-apụta n’ego Naịjirịa nke otu puku, n’ime afọ iri isii na otu.
Ọ bụ kwa nwaanyị nke mbụ ga-anọ n’ọkwa “Director of Currency Operations” n’ụlọakụ etiti na Naịjirịa.
Ihe abụọ ndị a bụ ihe mere o ji ewu ewu ebe niile na Naịjiria gụnyere soshal midia.
Lee ihe ndị anyị chọpụtara maka ya.
Ọ bụ onyeisi na-ahụ maka ngagharị ego na Central Bank bụ ụlọakụ etiti Naịjirịa..
Priscillia ga-esonye Ngozi Okonjo Iweala na Sandie Okoro bụ ụmụnwaanyị Naịjirịa abụọ nwere ọkwa n’ụlọakụ ukwu nke ụwa niile.
Anyị ga-ewetakwa ihe dị aṅaa maka Odoziakụ Priscillia Ekwere Eleje.
Priscilla Ekwere Eleje
Manchester United agbakwala ọnyụpa ọzọ dịka ha natara mkparị n’aka Everton ndị gbara ha ọkpụ goolu anọ asataghị otu.
Man United malitere nkeọma mgbe ha kwanyere Everton ọkụ n’ike na mmalite asọmpi a.
Mana Everton tụgharịrị buru ụzọ sụnye Man United goolu nke Richarlison nyere na nkeji 13 site n’enyemaka Calvert-Lewin.
Dịka a ka kpụ okwu n’ọnụ na nkeji 28, Everton si n’aka Sigurdsson gbawakwuo obi ndị Man United n’inye goolu nke abụọ.
Everton nọ n’enwete onwe ha dịka ha ekweghi Man United kpaa ike ọbụla ruo mgbe agba nke bụ kwụsịrị na nkeji 45.
Dịka agba nke abụọ malitere, Lucas Digne nke Everton, gbara aka ahịa n’imezu goolu ha atọ na nkeji 56.
Ebe a ka ike nọ gwụzie ndị Man United, ọ dị zie ka ha amaghị nke egwu na-akụ.
Ebe Everton nọ bọọzie Man United ka ọkụkọ ‘Easter’ bụ na nkeji 64, mgbe Theo Walcott nyere goolu nke anọ, nke mere ọkpụ anọ chara acha asataghị otu.
Merie a bụ mbụ Everton ga-eji ọkpụ goolu ruru anọ merie Man United kamgbe afọ 1981.
Dịka ọ dị ugbua, Manchester United nọ ndị isii ns tebụlụ Premier League n’ọnụ ọgụgụ 64.
Emeka Ihedioha bụ onye meriri na ntụliaka nke ọkwa gọvanọ emere n’Imo steeti ekwuola ọtụtụ ihe ọ ga-emere ndị Imo.
Otu n’ime ihe o kwuru na ọ ga-eme bụ imezi ihe mebiri emebi na steeti ahụ. Gere ihe ndị ọzọ o kwuru n’ihe nkiri a.
-Ebe a ka ị ga-amata ọnụọgụ vootu na ntuliaka Imo steeti
-Emeka bụ ihe dị ọha mma n’Imo
-Etu ntuliaka gọvanọ si aga n’ọwụwa-anyanwụ na ebe ndị ọzọ
Ka ndị mmadụ ka na-enwe aṅụrị maka mmeri Emeka Ihedioha meriri na ntuliaka ọkwa gọvanọ Imo steeti, ndị ọzọ ekwuola ihe ha chọrọ n’aka ya.
Ebe ụfọdụ na-achọ ka ọ rụọ ụzọ, ụlọọgwụ na ihe ndị ọzo, ụfọdụ chọkwara ka ọ kụtuo akpụrakpụ Rochas Okorocha rụrụ.
@JerryWright4 dere na Twitter sị ka Ihedioha lebanye anya n’ihe gbasara ibutu ụgwọisi ụmụnwaanyị Mbaise, maọbụ ka gọọmentị nyeretu ha aka ịkwụ ya bụ ụgwọ mgbe ha chọrọ ịlụ nwaanyị.
Congratulations our governor, @EmekaIhedioha. Please look into the bride price of Mbaise girls for eligible Imo bachelors like us. We don't mind if you pay us some form of subvention too when we indicate interest in them. Daalu
— Jerry Wright (@JerryWright4) March 12, 2019
Emeka Ihedioha kwere ndị Imo steeti nkwa na ọ gaghị awụ ha n’ala dịka ha si n’aka ntuliaka họpụta ya dịka onye ha chọrọ ka ha chịa.
O kwuru nke a site n’ihe o dere n’elu soshal midia, ebe o dere sị “Ndị Imo daalụ. Mmeri a bụ nke anyị niile! Agaghị m awụ unu n’ala! Okwu m bụ nkwa m na-ekwe!”
Thank you Ndi Imo.
It’s a victory for all of us!
I will not fail!
My word is my bond. pic.twitter.com/nvbcLQ9n6B
— Emeka Ihedioha (@EmekaIhedioha) March 11, 2019
Cheta na Ihedioha nwetara vootu 273,404 iji merie ndị ọzọ ya na ha so zọo ọkwa.
Ihe ndị mmadụ chọrọ n’aka ya:
Charly boy si Imo steeti ma bụrụkwa onye ọnụ na-eru n’okwu n’ihe gbasara ndọrọndọrọ ọchịchị, kwuru sị na ọ na-atụ anya na ọchịchị Ihedioha ga-abụ olileanya nye ndị Imo. Ọ sịkwa ya “kwanyere onwe gị ugwu”.
Congratulation for winning the Imo state governorship election. Ur party PDP or APC are to me both sides of a coin. However, I pray that your coming will be hope for Imo state.
Thank God is non of the other yahoo yahoo people, uche rochas etc etc.
Behave yaself. pic.twitter.com/abfzFyFc3S
— Charly Boy Area Fada 1 (@Areafada1) March 12, 2019
@MrStanleyNwabia kwuru na ihe mbụ Ihedioha kwesịrị ime ma ọ banye ọchịchị bụ ibugharị akpụrakpụ niile ahụ Rochas Okorocha kpụrụ, buga ya n’obodo Rochas.
Ihedioha's first executive act as Imo Governor should be to relocate all those Statues to Rochas Okorocha's country home.
— Mr Stanley Nwabia (@MrStanleyNwabia) March 11, 2019
@DuruchibuzorE kwuru na ugbua ka ọ ga na-alaruzi obodo ya makana Imo steeti esila n’aka “ndị na-akpụ” ihe pụta.
Now I can visit my hometown , Imo state has finally been freed from the clutches of the sculptor. Emeka Ihedioha should know that we are solidly behind you.
— Duru Chibuzor eric (@DuruchibuzorE) March 11, 2019
@DaChinagorom rịọrọ ya sị ya gbaa mbọ hụ na o mere ka Imo steeti bụrụ ebe a na-arụpụta ihe dịka Abịa na Anambara.
My new Governor, i hv few demands from u. Please take distinct measures to provide quality education, efficient medical services and make IMO state a manufacturing trade zone like our neighbors Abia and Anambra… 🙏
— O-B-I-N-N-A (@DaChinagorom) March 12, 2019
@iamLORDTM kwuru sị na ọ dị mma na a napụtara ọchịchị n’aka onye chọrọ ime ka ọ dịrị naanị n’ezinaụlọ ya.
The election result of Imo State just made me happy. No one man can be Governor and try to turn the state upside down just to make his son-in-law the next governor. This is a good day for we Imolites. #ImoDecides2019
— 𝕃𝕆ℝ𝔻 𝕋𝕄 (@iamLORDTM) March 11, 2019
@kingpado01 kwuru sị ka ọ gbaghachaa ala ndị “e zuru ezu”.
Please revoke all stolen lands..
— ATIKULATED (@kingpado01) March 11, 2019
@Buchyogba kwuru sị ya gbaa mbọ rụgharịa ụzọ ndị adịghị mma, kwụọ ndị ọrụ bekee e ji ụgwọ ọnwa, ma nyochaa ọchịchị Rochas.
U cant afford to fail
Clear outstanding workers salaries&pensions
Rehabilitate all failed roads
Reinstate all illegally sacked state workers
Revoke all lands forcefully collected by Rochas
Relocate ITC back to it's former place
Probe Rochas administration
— Buchy Strategy (@Buchyogba) March 12, 2019
Ash Wednesday: Kedụ ihe ịnara ntụ pụtara?
Taa bụ ụbọchị ndị na-ekpere Kraịst n’ụwa niile na-echecta dịka ụka ụbọchị ntụ “Ash Wednesday” na Bekee.
Ọ bụ ụbọchị ndị na-eso Kraịst na-edebe dịka ụbọchị dị nsọ, ha ga-aga nara ntu n’isi, ụfọdụ na-asọkwa ịta anụ n’ụbọchị a.
#AshWednesday 😊 I am a sinner trying to start anew pic.twitter.com/9DPLRKNDQS
— Bobinski 🤗 (@bobo_xcv) March 6, 2019
Mana gịnị ka ịnara ntụ n’etiti isi pụtara?
Archbishop nke Canterbury bụ Justin Welby kwuru na ịnata ntụ bụ iji gosi ndabere anyị nwere n’amara Chineke.
“By receiving the cross of ash, we acknowledge our human frailty – and our dependence upon God’s healing grace.”
Learn more about #AshWednesday in this film and find a service near you at https://t.co/NT4E9q2sJd #LentPilgrimpic.twitter.com/FIQm2GYs0P
— Archbishop of Canterbury (@JustinWelby) March 6, 2019
Ụbọchị ntụ bụ ụbọchị mbụ n’oge Beke kpọrọ ‘Lent’ nke ndị ụka Kraịst ji echeta ahụhụ Jịsọs tara mgbe ọ nọ n’ụwa tupu ọ nwụọ, wee binyekwa.
Na ngwụcha ‘Lent’ bụ oge ‘Easter’ mgbe a ga-eme mmemme maka Jịsoso ikwulite n’ọnwụ.
Oge a kpọrọ ‘Lent’ na-eru ụbọchi iri anọ bụkwa oge ndị mmadụ ji ahapụ ụfọdụ ihe na ndụ ha iji dị ka Chineke.
Kedụ ihe iri anọ ji pụọ iche?
Dịka ụlọ ntaakụko siri kwuo ụbọchị iri anọ bụ nke dị mkpa n’ebe ndị ụka Kristi nọ.
– N’akụwkọ Jenesis, Chineke mere ka mmiri zoo n’ụbọchị iri anọ
-Ụmụ Izrel gara n’Ọzara n’afọ iri anọ tupu ha eruo ala ekwere ha na nkwa
-Moses buru ọnụ ụbọchị iri anọ tupu o nweta iwu nsọ nke Chineke nyere ya.
-Jisos nọrọ n’ịkpa ụbọchị iri anọ ebe ọ na-ebu ọnụ na akwadokwa ọrụ ya n’ụwa.
Gịnị ka ị na-agbahapụ n’ụbọchi iri anọ tupu ‘Easter’ e ruo?
Ka Inec si akwado ntuliaka ọkwa gọvanọ n’ọwụwa anyanwụ
Ụlọọrụ Inec dị n’Imo steeti amalitela ikesa ngwaọrụ a ga-eji mee ntụliaka na steeti ahụ.
Na mgbede ụbọchị isii n’ime ọnwa Maachị ka ha bidoro na-ahazi ya bụ ngwaọrụ n’usoro okpuruọchịchị dị iche iche tupu ebugawa ya ebe ahụ.
Nke a na-eme n’ụlọọrụ ụlọakụ ukwu nke Naịjirịa bụ CBN dị n’Imo steeti.
Onyeisi ụlọọrụ Inec n’Imo steeti bụ ọkammụta Chukwuemeka Ezeonu, kwuru na ha ahụla na ntuliaka nke ọkwa gọvanọ ga-ata ezigbo akpụ, ya mere ha ji akwado n’oge ka ihe gaa nkeọma ụbọchị ahụ.
Ọ gara n’ihu nyocha ngwaọrụ ndị ahụ mara ma ha ezukwara ezu.
Ụnyaahụ bụ mkpụrụ ụbọchi ise nke ọnwa Maachị, ka ụlọọrụ inec kpọrọ ọgbakọ ndị ọnụ na-eru n’okwu n’Ebọnyị steeti.
Ndị pati 38 nakwa ndị otu na-abụghị nke gọọmenti bụ ndị ga-enyocha ka ya bụ ntuliaka nke a ga-eme na mkpụrụ ụbọchị itoolu nke ọnwa Maachị ga-esi gaa, bụ ndị nke dị iri (10) bịara ya bụ ọgbakọ.
Isiokwu Inec bụ na onweghi onye ọbụla ga-atụ vootu ụbọchị satọde na-ejighi igwe “smartcard reader”.
Inec sị na iwu a ga-akpụ okụ n’ọnụ n’ọgbọ a
Mgbe ndị bịara ya bụ mkparitaụka jụrụ ajụjụ si, “ọ bụrụ na “smartcard reader” arụghị ọrụ, gịnị ka a ga-eme?”, Inec zara sị na ndị ọrụ ha ga-ewete smartcard reader ọzọ were dochie nke mebiri emebi.
“Ọ bụrụ na nke ahụ ekweghi arụ ọrụ ahapụzịa ya ka ọ dịwa echi”.
Inec sị na akụrụngwa e ji arụ ọrụ ga-ahapụ ụlọọrụ ha ụbọchi Wenezde (Maachị 6) gawa ulọọrụ ha dị n’okpuruọchịchị dị icheiche, bụ ebe ha ga-esi gawa na RAC ha ụbọchị Fraịde.
Chris Onugbogu nke ulọọru Inec Ebọnyị steeti sị na “nke a ga-ewezuga ọgbatauhie pụrụ idapụta makana e mee ngwangwa, emeghara ọdachị.”
Mmadụ asaa n’ime mmadụ asatọ anwụọla ka ọkụ tanka gbara n’Amawbia dị n’Awka.
Haruna Mohammed bụ ọnụ na-ekwuchitere ndị uweojii na Anambra state kwuru na ọkụ a gbara ụgbọala ruru asatọ ma mebie ụlọ na ụlọ ahịa ha agụtabeghị ọnụ.
O kwuru na ebugala otu onye ka dị ndụ n’ime ndị ọkụ tanka a gbara n’ụlọ “Nnewi Teaching Hospital”.
Haruna kwuru na ya na ndị otu ya nọ na-akwalisi ihu ebe ihe a mere ka ụzọ were gara ndị ọzọ were were.
Onyeisiala Naịjirịa bụ Mohammadụ Buhari azarala ọnụ ya n’ebubo Nnamdi Kanu boro ya na ọ nwụọla kamgbe afọ 2017.
Buhari katọọrọ ebubo a site n’okwu o kwuru mgbe ya na ndị Naịjirịa bi na obodo Krakow nke mba Poland na-akparị ụka.
JUST IN: "A lot of people hoped that I died during my ill health. It is real me… I will soon celebrate my 76th birthday and I will still go strong.” — President @MBuhari this evening in Kraków, Poland. His response to a question of him being cloned. pic.twitter.com/JL9QfUF3PL
Onye enyemaka ya pụrụiche na mgbasaozi ọgbara ọhụrụ bụ Bashir Ahmad depụtara nke n’akara twitter ya;
Buhari kwuru “Ọtụtụ ndị chere na m nwụrụ n’oge m na-arịa ọrịa. Ihe a bụ mụ n’ezie.”
“Aga m eme emume ncheta afọ iri asaa na isii nke ọ mụmụ m. M ka ga-adị ike.”
Special Report3 months ago
Parliament3 months ago
Life & Style3 months ago
Igbo3 months ago